UGisella - Isexwayiso Sizodalula Konke - Ukubalwa Kwe-Kingdom
Ntokazi yethu	UGisella Cardia ngoFebhuwari 6, 2021:
Bantwana abathandekayo, ngiyabonga ngokuphendula ubizo lwami ezinhliziyweni zenu. Zingane zami, iningi lenu lilindele isixwayiso ngokungathi bekungesihawu nje, kodwa khumbulani, zingane, kuzoba futhi umcimbi ozoveza impilo yenu ngokuhlinzwa. Bantwana bami, ngize phakathi kwenu ukuhlanganisa ndawonye insali yami ethembekile. Bantwana, maningafani nabaFarisi: ningaqambi amanga, khumbulani ukuthi ngibona izinhliziyo zenu futhi akukho lutho oluyongifihlela. Bantwana, fakaza njalo futhi ube nesibindi; kwesinye isikhathi uzizwa wesaba ukwahlulelwa kwabanye njengoba kwenza abaPhostoli, kanti abanye babo baphika uJesu ngenxa yokwesaba, kepha babekhethwe Nguye. Zingane, thandazelani abanamandla bomhlaba ukuthi bangathathi indlela abanayo engqondweni, ngoba izingane zami nekusasa labo kuzoya ngezinhlelo zabo - izimpi ziyahlelwa. Zingane zami, ngilapha futhi ngiyanithanda. Yakha imikhuleko yokuthandaza yonke indawo: namuhla umhlaba uyakudinga - thandazela iSonto nalabo abakuphetheyo. Manje ngikushiya nesibusiso sami sikamama egameni likaYise, leleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Amen.
* Ukufunda Okuhlobene Nezinsalela
UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye I
UMama wethu: Lungiselela - Ingxenye III
Abapristi Nokunqoba Okuzayo
Posted in UGisella Cardia, Imilayezo, Ukukhanyiselwa Konembeza, Isexwayiso, Ukuphindaphinda, Isimangaliso.
← UPedro - Yilabo Abathandazayo Kuphela…
Umphefumulo waseCalifornia - With… →